Semalt: Fahatakarana ny maha-zava-dehibe ny SEO ny votoaty
Amin'ny alàlan'ny tranokalanay dia hahalala betsaka momba ny SEO ianao, fa eto, hiresaka isika ny antony maha-zava-dehibe ny SEO ny atiny. Tokony ho fantatrareo izao ny dikan'ny SEO, fa raha tsy izany dia manana fizarana voatokana amin'izany isika .
Saingy mbola eo ihany ny fomba fijery. Azontsika atao ny Optimization Search Engine amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny teny sasany ao amin'ny tranokalanao. Nahita na inona na inona ve ianao? Raha tsy izany dia avelao hisarika ny sainao amin'izany aho. Ny SEO ihany no ho tratra raha tsy amin'ny alàlan'ny fifangaroana misy soratra tsara sy ny fampiasana tsara ireo teny fanalahidy. Raha tsy misy ny fifandraisan'izy roa ireo dia tsy hisy SEO.
Ny voatanisa dia zavatra voasoratra tsirairay ao amin'ny tranonkalanao. Ao anatin'izany ny pejinao landing, ny pejy an-trano, momba anay pejy ary ny antsipiriany hafa izay nataonao tao amin'ny tranonkalanao. Matetika ny olona dia mahatsapa fa afaka mametraka teny fanalahidy amin'ny toerana rehetra izy ireo fa tsy ny ekipanay. Mino izahay fa ny teny fanalahidy dia tsy maintsy ampiasaina amin'ny fomba tsara indrindra, tsy ny fanabeazana ny mpamaky fotsiny fa mba hahatsapa tanteraka.
Ny votoatinao dia ny lakilen'ny famarotana varotra. Tahaka ny nohazavainay dia ilaina ny hahazoana SEO amin'ny fivezivezena amin'ny tranokalanao. Fa ny fanarenana ny olona hahita ny vokatrao dia tsy hampanan-karena anao. Mila mitodika any amin'ireo mpanjifa mandidy ireo vokatra na serivisinao izay andidianao ireo mpitsidika ireo. Ity no miditra ny votoatiny. Manazava amin'ireo mpitsidika anao izay azonao atao ho azy ireo izy ireo. Izy ireo dia mamaritra, mampahafantatra ary mandresy lahatra ny mpamaky. Noho izany, mila ny votoatinao ho roa SEO optimized ary nosoratan'ny matihanina iray Semalt.
Raha tsy misy votoaty dia ho very ny mpamaky tsy misy sarintany na torolalana fampianarana.
Alao sary an-tsaina hoe mandeha any amin'ny hotely iray ianao izay milaza ho kintana dimy, fa asiana tsindrin-tsakafo aloha ianao, avy eo ny manina mialoha ny lovia lehibe. Tsy hanome anao traikefa 5 kintana ve izany? Mampiseho izany fa tsy ampy ny fahalalana SEO; mila fantatrao ny mandamina azy ireo, ampiasao tsara ao amin'ny tranonkalanao. Ary ny hany fomba anaovana izany dia ny fanoratana votoaty misy dikany.
Raha te hampiasa teny fanalahidy dia mila ekipa iray manan-talenta ary voatokana ho anay mba hametraka ny teny mety amin'ny filaharana mety. Tsy asa tsotra izany, ary tsy tokony hapetranao amin'ny olon-drehetra izany.
Ny fahaiza-manao fanoratana ratsy miaraka amin'ny teny fanalahidy rehetra ilaina dia hahatonga ny olona hitsidika ny tranokalanao. Saingy rehefa namaky izay teo izy ireo dia hosoratany amin'ny fomba tsotra ilay izy satria nampiasa ny teny fanoratana ianao fa tamin'ny fomba diso.
Inona no mahatonga ny votoaty zava-dehibe indrindra amin'ny SEO
Ny ekipanay dia mifantoka amin'ny firafitry ny atiny, ny fitsipi-pitenenana, ny tonony ary ny fahafahan'ny mpamaky mifandraika amin'ny vokatrao sy ny serivisinao. Miaraka amin'ny mpanoratra ny votoatinay dia mahazo tombony amin'ny fahaiza-manao famoronana sy ny fanoratana miaraka amina fahalalana betsaka momba ny teny fanalahidy sy ny fomba tsara indrindra hampiasana azy ireo ianao.
Fikarohan-teny momba ny teny: hanomezana anao ny isan'ny biraonao be dia be indrindra, mila fantarintsika izay tena tadiavin'ny mpihaino kendrena anao. Tsy misy teny fanalahidy manerantany amin'ny zava-drehetra. Ary tsy tranonkala iray ianao. Mba hanomezana anao ny fitsaboana tsara indrindra, mikaroka ireo teny fanalahidy efa zatra mifandray amin'ny vokatrao ianao.
Izahay dia manondro ny fomba hitadiavan'ireo vondrona taona ny fikarohana ny vokatrao na serivisinao.
Ny tsy fitovian'ny fanangonana ny teny manerana ny toerana ara-jeografika
Ary ny fijerin'ny mpampiasa mifototra amin'ny fahatakarany ny zavatra ilainy.
Mihevitra izahay fa tsy fantatrao izany rehetra izany. Izany no antony ilainao ny ekipan'ny fanoratana votoaty Semalt amin'ny tetikasanao. Izahay dia mandinika ireo lafin-javatra maro isan-karazany toy ireo ary ahitantsika ny teny manan-kaja am-polony ao amin'ny tranonkalanao Amin'izany fomba izany, ny tranonkalanao dia tsy mahita na inona na inona ny fitadiavan'ireo mpampiasa ny Google. Hitanareo, ary rehefa misy tsindrio izy ireo dia voafandrika. Fatratra ny zavatra atolotray ka tsy ahatananao ny masonao mandra-pahavitan'ny famakiana.
Aza manandrana manaporofo fa diso izahay amin'izao fotoana izao. Tohizo ny famakiana; mbola be dia be no ambaranay aminao.
Endri-javatra momba ny votoatin'ny SEO
Tsy mitovy ny maha-tokana azy: imbetsaka isika mamaky lahatsoratra ao amin'ny Internet, ary toa tsy fahita firy izany. Taorian'ny fisaintsainana kely dia tsaroantsika ny mamaky zavatra mitovy na ny fehezanteny marina. Mety tsy hiteny izany isika fa diso fanantenana isika satria mila zava-baovao, hafa. Ankehitriny, diniho ny serivisy fanoratana na famaritana famokarana mitovitovy amin'ny fifaninanana. Tsy mieritreritra izahay fa misy fomba tsara kokoa hilazana ny fifaninanana ataonao.
Miaraka amin'ny atiny tsy manam-paharoa, Semalt dia manolotra atiny izay tokana amin'ny tranokalanao irery. Rehefa manoratra ny ekipa anay dia mahita ny marika anao nanoratra azy rehetra ianao. Mahatsapa mifandray amin'ny atiny sy ny vokatra / serivisy atolotrao ianao.
Mampahafantatra ny mpampiasa anao fa toy ny fifaninanana ataonao, hafa ianao ary tsy manam-paharoa ary tiana daholo isika rehetra. Gaga maro ny mpanjifanay rehefa manazava ny hoe ampy ny zavatra atokana tokana ananantsika mba hitazonana ny mpanjifany.
Sary: Samy tia sary isika rehetra ary mifikitra tsara kokoa ao amin'ny fitadidiantsika. Tsy mahagaga raha manandrana manatsara ny toetran'ny fakan-tsary ny ankamaroan'ny telefaona ankehitriny. Izany dia satria ny olona rehetra te hahita zavatra tsara sy toerana. Io fahatsapana mahafinaritra io no miaraka amin'izany. Mampahatsiahy ahy ny antony nianarantsika namaky teny toy ny ankizy niaraka tamin'ny sary. Manampy ny fiainana amin'izay rehetra ataontsika ny sary. Ny endrika atiny dia misy endrika sary samihafa. Manana sary mifangaro, sary, ary sary isika. Manamora ny mpamaky hamaky izy io nefa tsy mahatsiaro ho sosotra. Ho an'ireo mpamaky mafana fo dia ny zavatra voalohany ataon'izy ireo rehefa mitondra boky dia ny mijery sary. Raha vao mahita ireo mahavariana sasany izy dia mora kokoa ny mamaky azy ireo. Toy izany koa no mihatra amin'ny atiny tranonkala. Ny sary, sary, ary ny sary dia misarika ny sain'ny mpamaky.
Izy io dia manampy azy ireo hahatsiaro haingana kokoa ny tranokalanao. Imbetsaka isika rehefa manadino ny anaran'olona iray, dia tsaroanay ireo rafitra manodidina sy ampiasaintsika hahatsiarovana io adiresy io. Ka rehefa manandrana mitadidy ireo serivisinao na ny vokatrao ny mpamaky iray dia tsy maharitra ela, isaorana ny sary nampidirinay ao amin'ny tranonkalanao.
Rafitra: tsy ny zava-drehetra no atorinay. Ny fomba fijeriny dia lasa lavitra be amin'ny famaritana raha mamaky azy ireo na tsia ny mpitsidika. Zava-dehibe ny firafitry ny antony roa lehibe. Ny firafitry ny tranokala tsara dia manampy ny Google hahita ny tranonkalanao haingana kokoa: ny tanjona dia ny hanoratra ao anaty rafitra izay mety ho an'ny Google ny mahita fanoratana. Ny firafitry ny atiny ao amin'ny tranokalanao dia mamaritra raha ny motera fikarohana no mahazo ny heviny momba ny tranokalanao ary amin'ny fomba mora ahitany ny atiny mifandraika amin'ny zavatra notadiavina.
Amin'ny alàlan'ny famoronana votoatiny amin'ny firafitra mety, dia afaka manintona rohy avy amin'ny hafa ianao mba hanampy ny laharan'ny pejyo ihany koa. Ho an'ny orinasa tahaka ny anao, izany dia azonao atao ny mampiasa ny votoatin'ny SEO hanamafisana ny laharan'ny search engine ny pejy misy ny varotrao. Ny firafitra tsara dia manamora ny famakiana.
Mety ho takelaka maromaro ny tranokalanao ary samy mitondra ny atiny tokana. Tsy tianao ny hahita ny mpamaky anao hahita ny pejin-tranonkalanao ho toy ny ranon-javatra na ireo andian-tsoratra misy andiany. Izany no antony ataonay ny rafitr'izy ireo. Izahay dia mitazona ny votoatinao ho fohy, mora vakiana ary misy fahalalana.
Matetika, tsy mitsidika ny tranokalan'ny orinasam-bola izahay hamaky mandritra ny ora maro. Mila fampahalalana ampy fotsiny izahay hanamarinana fa izay omena dia ny ilaintsika. Noho izany, mampahafantatra ny mpamaky anay ny votoatiny mba hahafantaran'izy ireo ny fividianany, fa tazony ho fohy sy tsotra araka izay azo atao izy ireo. Manamora ny fividianana sy fandoavam-bola izy ireo raha tsy mahasosotra azy ireo amin'ny dingan'ny famakiana.
Andeha atao hoe te hividy mpamatsy famafazana ianao, dia vakio ny famaritana, fa tsy atiny ny fanazavana momba ny endri-javatra, dia tombony izany, fa manazava ny tantaran'ny mpitrandraka. Hiakatra roa ny ankamaroan'ireo mpamaky hahita mpamatsy hafa.
Ny firafitray dia mahazo ny fampahalalana manan-danja indrindra amin'ny mpamaky, am-piandohana voalohany ny varotrao.
fanovana: Ho an'ny tranokala taloha, nesorinay ireo atiny taloha ary nosoloinay vaovao. Amin'ity fomba ity, havaozina ny mpitsidika ireo tolotra farany ataonao, na ny endri-javatra vaovao nampidirinao ireo fampiasa teo aloha. Raha efa lany ny zavatra ao anatiny, hosoloinay vao haingana sy vaovao kokoa. Ireo mpitsidika dia afaka mahita ny serivisy atolotrao ankehitriny fa tsy ireo efa lany andro. Mino izahay fa fahendrena ny manova ny tranokalanao amin'ny fotoana fohy. Amin'ity fomba ity, na dia ireo zokinao zokiolona aza dia hanana zavatra vaovao tsy andrasana rehefa mitsidika azy ireo.
Ny ekipan'ny votoatin'ny Semalt dia mpanoratra mpanoratra matihanina tena tsara izay mifanaraka amin'ny zavatra ilainao rehetra. Tsy toy ny mpanoratra hafa ny dinika eto izay mifanakalo hevitra aminao voalohany. Amin'izany fomba izany, tsy vakiteny fotsiny no soratan'izy ireo fa manoratra atiny mizara ny hevitrao sy ny tanjonao ary ny fahitana anao izy ireo. Amin'ity fomba ity, mahatsapa fifandraisana ianao amin'ny tranokalanao, ary rehefa manontany anao manokana ny mpanjifanao na ny mpitsidika anao dia afaka mamaly mora foana ianao. Misaotra anao noho ny ekipa mpanoratra momba ny votoaty haingo an'ny Semalt, hahazoanay harena ianao.